International News – Na Pann San
Na Pann San W | August 17, 2020
မနေ့က (ဩဂတ်စ် ၁၆ ရက်နေ့) သူ့ရဲ့ Facebook page မှာ တင်ခဲ့ရာမှာ အခုမေ လးရှားမှာေ တွ့တဲ့ Covid ဗိုင်းရပ် စ်မျိုးကွဲဟာ D614G mutation ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီ D614G mutation ဟာ အခြား Covid ဗိုင်းရပ်စ်မျိုး ကွဲတွေထက် လူကိုကူး စက်ဖို့ဆယ်ဆ
ဂျပန် တို့ လက် နက် တပ်ဆ င်ကြတော့မည်ေ လာ… လက် ရှိတွင် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် တဖန် ပျံနှံ့လာေ နမှု နှင့် အတူ စီးပွားရေး တုန့်ဆိုင်း လာနေမှုများ အပေါ် အစိုးရ၏ ကိုင်တွ ယ်မှု ညံ့ဖျင်းကြောင်း လူထု၏ ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ်
( သြဂုတ် – ၁၇၊ ၂၀၂၀ ) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၅-သောင်းကျော်လာသော အိန္ဒိယတွင် မြန်မာ ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် အက်ဒမန်နှင့် နီကိုဗာကျွန်းတို့၌ပါ ကူးစက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပွားနေ။ အိန္ဒိယ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ၁၇-ရက်အတွင်း လူ ၁-သောင်း ၂-ထောင်ခန့် သေဆုံးခဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကျရောက်လျှက်ရှိသော အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရှိ (
အယ်လ်ရှာဘက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ မိုဂါဒစ်ရှူး ဟိုတယ် အပိုင်စီးမှု အကြမ်းဖက် သမား ၄ – ဦး ကို လုံခြုံရေးတပ် ဖွဲ့ဝင်များက အသေပစ်သတ် ဖမ်းဆီး
Na Pann | August 17, 2020
သြဂုတ် – ၁၇ ၊ ၂၀၂၀ ဆိုမာလီနိုင်ငံ မိုဂါဒစ်ရှူးမြို့တော် တွင် အယ်လ်ကိုင်ဒါ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ ၏ ဒေသန္တရ အဖွဲ့ခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော “ အယ်လ်ရှာဘက် “လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့၏ ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ် တစ်ခုအား စီးနင်းသိမ်းပိုက်မှု မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ၀င်များနှင့်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးဟာ ဘယ်တော့ မှ ရှာမတွေ့တာလဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း WHO သတိပေး
Na Pann | August 16, 2020
ကို ရိုနာ ဗိုင်း ရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပွား တဲ့ COVID-19 ရောဂါ ကာ ကွယ်ဆေး မျှော်လင့် ချက်တွေ သန်း လာပေ မယ့် ကမ္ဘာ့ ကျန်း မာရေး အဖွဲ့ကြီး WHO အကြီးအကဲ ကာကွယ်ဆေး ဟာ ဘယ်တော့ မှ ရှာမတွေ့ဘဲ ဖြစ်ကော င်းဖြစ်နိုင်
အမေရိကန် ကြားဝင်ဆောင်ရွက် မှုဖြင့် ယူအေအီးနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံ တို့ သံတမန် တည် ထောင်မှု မဟာသီယာမိုဟာမက် ရှုတ်ချ
အမေရိကန် ကြားဝင်ဆောင်ရွက် မှုဖြင့် ယူအေအီးနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံ တို့ သံတမန် တည် ထောင်မှု မဟာ သီယာ မိုဟာမက် ရှုတ်ချ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဟုဆို ယူအေအီး – အစ္စရေး သဘော တူညီမှု မှာ မွတ်စလင် ကမ္ဘာ တွင် တိုက်ခိုက် လိုသော အုပ်စုများ
လောဘကြီးပြီး လူတိုင်း အပေါ် ကလိန် ကျမှု ကြောင့် မကြာခင် ပြိုဆင်း တော့ မယ့် မဟာတံတိုင်းကြီး
Na Pann San W | August 16, 2020
လွန်လေ ပီးသော နောင်တ လက်တွေ့ကျမှ သိကြ ပီပေါ့… ပြောလိုက်တဲ့ စကား အရှက်တရား ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှာရမှ န်းမသိ…တောင်းပန်တာတောင် မှ အသားယူပြောတ တ်တဲ့ လူစား မျိူးတွေဘဲ…. ဘာတဲ့. မိမိနိူင်ငံဟာ သူတပါးအပေါ်တစ်လက်မမှကျူးကျော်ခြင်းမရှိပါဘူး….နိူင်ငံကြီးပီပီ စောင့်ထိန်း ရမဲ့ ဥပဒေ ကို တိတိကျကျ.လိုက်နာဆောင်ရွက်နေပီး အရိုးသားဆုံး ပွင့်ပွင့်
လူ ဒါဇင်ချီ သေဆုံးနေသော မြောက်ကိုရီးယားရေကြီးမှု အခြေအနေဆိုးနေသော် လည်း ပြည်ပ အကူအညီ ကို လုံးဝ လက်မခံ ဟု ကင်ဂျုံအန် ပြော
မြောက် ကို ရီး ယား ရဲ့ ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် မှာ နိုင်ငံတကာက ပေးပို့ တဲ့ အကူအညီတွေ ကို လက်ခံသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကင်ဂျုံအန်က ဒီနေ့ပြောလိုက် ပါတယ်။ နိုင်ငံတွင်းက ရေဘေးသင့်ဒေသတွေ ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုချိန် မှာ ကင်ဂျုံအန်က အခုလိုပြောသွားခဲ့တာပါ ။ လက်ရှိ
နာမည်ဆိုး ဖြင့် ကျော်ကြားနေသည့် ပါကစ္စတန် စစ်ထောက်လှမ်းရေး မှ မြန်မာပြည်တွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ ဖန်တီးရန် လှုပ်ရှားနေ ဟု ဆို
နာမည်ဆိုး ဖြင့် ကျော်ကြားနေသည့် ပါကစ္စတန် စစ်ထောက် လှန်းရေး Inter-Service Intelligence (ISI) သည် နိုင်ငံတွင်း ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူ အယောက် ၄၀ ခန့်ကို အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ ကျူးလွန် ရန် လေ့ကျင့်ပေးလျှက် ရှိနေသည် ဟု ဘဲလ်ဂျီယံ အခြေစိုက် တောင်အာရှ ဒီမိုကရက်တစ်
ထိုင်ဝမ်ကျွန်းစု သို့ Lockheed Martin ထုတ် နောက်ဆုံးမိုဒယ်လ် F-16 တိုက်လေယာဉ် ၆၆ စင်း ရောင်းချရန် သဘောတူညီမှု အကျိုးဆက်ကို ပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်မည်ဟု အမေရိကန်ကို တရုတ်ခြိမ်းခြောက်ကြုံးဝါး
ထိုင်ဝမ် သို့ အမေရိကန် က F-16 တိုက်လေယာဉ် ဒေါ်လာ ၆၂ ဘီလီယံ ဖိုး ရောင်း မည် ။ ဒီ အရောင်း အဝယ် ကတော့ တရုတ် အတွက် ကျွဲမြီးတို ရဖွယ်ရှိနေ ပါတယ် ။ ထိုင်ဝမ် က Lockheed Martin ကော်ပိုရေးရှင်း